पशुपतिमा चढाएको सुनको लागत नै गायब, ५६ वर्षमा जम्मा ९ किलो ! « Janata Times
पशुपतिमा चढाएको सुनको लागत नै गायब, ५६ वर्षमा जम्मा ९ किलो !
धर्म हुने भन्दै पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन्। चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने पनि हुँदा रहेछन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो पाइएको छ। २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण अभिलेखमा छैन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ को सुन पनि अभिलेखमा छैन।
समितिले खोजमा २०२० मंसिर ५ गते पहिलोपटक पशुपतिनाथलाई सुन चढाइएको अभिलेख भेट्टाएको छ। पहिलोपटक ३ तोला ३ मासा ७ लाल सुन अर्पण गरिएको थियो। यसलगत्तै मंसिर १५ गते ९ तोला ८ मासा ९ लाल सुन मन्दिरमा चढाइएको थियो। यसपछि २०२१ देखि २०२६ सालसम्म कसैले पनि पशुपतिनाथमा सुन चढाएको अभिलेख नदेखिएको संयोजक थापाले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार पशुपतिनाथमा जम्माजम्मी ९ किलो २७६।६४ ग्राम सुन रहेको पाइएको छ। त्यो २०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा भक्तजनले चढाएर विवरणमा राखिएको मात्र हो। त्यस्तै ३ सय १६ किलो ५८६ ग्राम चाँदी पाइएको छ। संयोजक थापाले पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको अभिलेखका आधारमा खोजी गरिएको बताए।
कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले पनि वर्षभरिको भेटी जम्मा पारी सुन किन्ने चलन रहेको तर त्यसको तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राखिएको भन्नेमा ग्यारेन्टी नदेखिएको बताए। उनले भने, ‘२०६८ सालअघि सुन चढाए पनि दर्ता गराइहाल्ने चलन देखिँदैन। यसरी चढाए भन्ने हुन्थ्यो केही पछि दर्ता गरेको पनि देखियो, केही नगरेको पनि हुनसक्छ।’ कोषका एक सदस्यले सुनको चुस्त अभिलेख नभएकाले शंका गर्ने ठाउँ भएको दाबी गरे। इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसीले लोकतन्त्र आए पनि आयव्ययमा पशुपतिनाथमा अझै पनि सबै विषयको पारदर्शिता नदेखिएको बताए।
संयोजक थापाले छानबिन समितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन कम्तीमा पाँच वर्ष लगाएरमात्र पूर्णता हुने बताए। उनले भने, खासगरी २०६८ सालमा ऐन र नियमावली बन्नुअघि सुन र सम्पत्तिको विषयमा जति दाखिला छ त्यो पूर्ण छैन भन्ने देखिन्छ, यसको गहन छानबिन गर्नैपर्छ।’ (अन्नपूर्णबाट)